Galaxy S9 na S9 + na -enweta mmelite dị iche iche nke Mee 2019 | Androidsis
Samsung bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kacha mara maka idobe ngwaọrụ ha kacha mma, yana karịa mgbe ọ bịara na ọkọlọtọ ha. E gosipụtara nke a site Galaxy S9, abụọ ya ọkọlọtọ site na 2018 ha enwetala nkwalite firmware ugbu a.
Mgbe ọ bụla mobiles ndị a nwetara ụdị firmware ọhụrụ, ndozi ha na -ata bụ ihe dị ịtụnanya, na ikpe a abụghịkwa otu, dịka enwetala njikarịcha bara uru na ngalaba dị iche iche, dị ka ọ dị na igwefoto, njikọta na nchekwa.
OTA, maka Galaxy S9 na S9 +, arọ banyere 380 MB. Agbanyeghị, maka nke mbụ ọ na -abịa n'okpuru ụdị firmware 'G960FXXU4CSE3', ebe maka nke abụọ n'okpuru ụdị 'G965FXXU4CSE3'. N'agbanyeghị nke a, nkwalite na nkwalite bụ otu maka ekwentị mkpanaaka abụọ dị elu.
Mmelite Galaxy S2019 na S9 + Mee 9
Na mbụ, ngwa ngwa na -eweta patch nche ọhụrụ, nke dabara n'ọnwa Mee a. Nke a na -egbochi ha iyi egwu nchekwa ọ bụla yana ka ọ dị ugbu a, dịka Google na -arịọ ndị nrụpụta ka ha debe ngwaọrụ gam akporo ha.
N'aka nke ya, dị ka anyị kwurula, akwalitela akụkụ foto nke ekwentị abụọ a. Nke a gụnyere ịchọ mma ihu na ndekọ vidiyo na -eme nwayọ nwayọ, yana igwefoto n'ozuzu ya. Yabụ, anyị ga -enwe ike ịhụ arụmọrụ ka mma n'ịse foto, site ugbu a gaa n'ihu.
Emekwara ka njikọta Bluetooth ka mma. Anyị amaghị dịka nkwalite ndị metụtara nke a, mana o doro anya na nkwụsi ike nke njikọ bụ isi ihe na nke a. Yabụ ịnyefe ekwentị na mmekọrịta site na iji njirimara a nwere ike kwụsie ike.
Esemokwu dị n’etiti Samsung Galaxy S10 na Samsung Galaxy S9, ọ kwesịrị mgbanwe ahụ?
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịkọwa na ọ nwere ike ị nwetabeghị OTA, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ụdị ndị a. Nke a bụ ihe nkịtị, maka na, n'ọtụtụ oge, ọ na -eji nwayọọ nwayọọ agbasa. Na ngwụcha ụbọchị, akụkọ ahụ na -adị otu mgbe niile: ngwaọrụ niile na -enweta ya, ma n'ime awa, ụbọchị ma ọ bụ izu ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung si Galaxy S9 na S9 + enweta a isi update dị iche iche na ndozi
Pokémon Rumble Rush nyochaa: ọzọ gacha, ma oge a site na Nintendo